मेरिना Tsvetaeva गरेको रचनात्मकता एक निश्चित रूपरेखा साहित्यिक रुझान मा फिट गर्न गाह्रो छ। त्यो सधैं एक्लै थियो, यो एक्लै खडा। जीवन र अस्तित्व बीच कवि संघर्ष को धेरै विशेषता। एक उत्कृष्ट उदाहरण यसको प्रारम्भिक कविता "मड्यूलर पुरानो मास्को" छ। यो बस्थे र प्रेम गर्ने मान्छे - त्यो जो टाढा सबै भन्दा महत्वपूर्ण यसको पछिल्लो ऐतिहासिक सबै कि सानो रिमाइन्डर बह, र नयाँ पहिचान गर्न नसकिने मास्को, को उद्भव भविष्यवाणी।
मेरिना आई काम मा
कवि विशिष्ट र स्पष्ट चित्र सिर्जना गर्दा पनि, स्थिति निर्दिष्ट, आफ्नै समय होइन। यसलाई अन्य दुनिया को वर्तमान समयमा चाँडै घुल। मायावी, लचिलो rhythms फिड - यी कवि को पद को मुख्य संकेत हो। जहाँ अक्षरहरू yellowed कागज भण्डारण छन् पहना कुर्सियों भित्र, एक कार्ड-तालिका, एक डेस्क, संग, whitewash peeling संग, काठ स्तम्भहरू: दृश्य तस्बिरहरू कविता मा "पुरानो मास्को घरहरू," हामी तिनीहरूलाई देख्न एकदम निश्चित हो यद्यपि, यसको मुख्य शक्ति छैन। र वी Polenov "हजुरआमा गरेको बगैचा" को तस्वीर सम्झना।
मेरिना Tsvetaeva को कविता बरु माधुर्य भन्दा, भाषण को व्यवस्था पालन यसलाई spontaneously थिए, जन्म छन्, र यो ससर्त छ stanzas तिनीहरूलाई विभाजन। आफु त्यो रहस्य, कुरा साँचो सार देखे कि सबै आफ्नो डायरीहरू मा यस्तो लेखे Poetess। किनभने त्यो ईश्वरीय Providence विषय हो जो र कुलीन लागि डिजाइन उच्चतम harmonies, अनुसार वास्तविक संसार transfigured। रूसी कविता मा वास्तविकता को एक keen, धेरै विशेष धारणा एक कवि पाउन असम्भव छ। Tsvetaeva संसारमा घटेका सामाग्री, पार्थिव र आध्यात्मिक, सिद्ध, स्वर्गीय बाँध्छ। पछि जीवन मा उनको हरेक दिन फिट, तर जीवन नै OBLIVION मा पर्छ। Romanticism उनको मनोवृत्ति यथार्थवाद को चुचुराहरूको गर्न rises।
उनको कवितात्मक भाषा नवीन थियो। मेरिना Tsvetaeva शब्दहरू सत्य, अन्तिम सत्य खोज्ने उनको बेचैन आत्मा सुने। भावना र मेरिना Tsvetaeva, भाग्य को एक formidable मानिस, को अद्वितीय प्रतिभा को तनाव राष्ट्रिय कविता आफ्नो वैध स्थान पाएका छन्।
कविता "पुरानो मास्को घरहरू" 1911 मा लिखित। यो कवि, को गेय दुःख त्यो माथि सधैंभरि 1870s को युग पक्रने वर्णन जो संग शक्ति मात्र उन्नाइस वर्ष पुरानो, तर सही र सत्य थियो। को "घर" शोकगीत पहिले नै नष्ट लागि नोस्टाल्जिया, सधैंभरि प्रस्थान ध्यान लगाए। त्यो भव्य संस्कृति को कही बाँकी रंग admires। Tsvetaeva "पुरानो मास्को को हाउस" प्राचीन को aestheticization चित्रित। को सूर्यास्त को तीता प्रत्येक stanza मा सुने मन्दहोता। त्यो तिनीहरूलाई मा एक छ-मंजिल्ला वजन freaks शहर को स्पेस बाढी सुरु नयाँ हार्ड procession प्रगति विरोध, मास्को को languid र शान्त आकर्षण को पूर्ण साँचो अनुहार देखे। यस करुणामय कविता "पुरानो मास्को घरहरू" epitaph प्यारा हृदय प्राचीन पढ्न छ। "कहाँ - त्यो सोध्छन् -? चित्रित छत, छत गर्न दर्पण"। हामी पर्दादारवाद्ययन्त्र को कर्डहरु किन सुन्न छैन, रंग मा भारी गाढा पर्दे हेर्न भएन? जहाँ गरे जो सेना वर्दी वा वर्दी मा एक गणनामा कलर संग wigs र प्रमुख साहसी मानिसहरू मा राम्रो महिलाहरु stared सोने को पानी चढा फ्रेम मा गोलो पोट्रेट? जहाँ carved शताब्दीपछि, जहाँ आफ्नो अनन्त सजावट लागि खडा देखिन्थ्यो जो फलाम गेट, - सिंह 'टाउको? यो विषय छ "घर।"
कविता "पुरानो मास्को घरहरू" छन्द को भाग लिखित छ quatrains हुन्छन्। "Languid" को epithet schemit हृदय जबरजस्ती, दुई पटक दोहोर्याइएको छ। अन्य epithets - "पुरातन गेट", "काठ बार", "चित्रित छत" - पछिल्लो छैन यसको सौन्दर्य र आकर्षण गुमाएको छ जो, मूल antiquities को महानता कुरा। Metaphorically यी घरहरू को लापता हस्तान्तरण। तिनीहरूले बरफ महलों जस्तै, तत्काल एक जादू छडी दुष्ट को एक लहर संग गायब। मायालु हृदय कवि कोमलतासाथ यो सानो संसारमा, diminutive प्रत्यय घरमा छैनन् प्रयोग alleys र पक्ष सडकमा बिना आएको र घरहरू। Parallelism सुरु र कविता संग समाप्त हुन्छ।
आफ्नो आध्यात्मिक अनुभव व्यक्त गर्न खोजे प्रारम्भिक वर्ष देखि कवि। यो सबै STEREOTYPES टाढा थियो। Tsvetaeva हाम्रो कविता बायाँ समय ऐतिहासिक सीमाहरु मा फिट गर्दैन असाधारण र ट्र्याक।
आई ए Krylov "द किसान र कामदार" - राजनीतिक उत्प्रेरित एक छोटो कथा
Vecheslav Kazakevich: जीवनी र रचनात्मक गतिविधि
Alisher Navoi: उल्लेखनीय आंकडा को जीवनी
Sasha Cherny। जीवनी - सबै रमाइलो
"गोमेद": Flanges र आफ्नो किसिमहरु
एउटै Gulliver सारांश। "Gulliver गरेको यात्रा" मास्टर लागि प्रतीक्षामा छ
विभिन्न व्यवसाय र मान्छे बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध। व्यक्तिगत र व्यापार सम्बन्ध प्रकृति
Puff केक, माटो, कपडा वा कागज देखि आफ्नै हातले नेस्टिङ पुतली
सँगै वा अलग, "अनुपयुक्त" - सही हिज्जे
घर पकौडी नुस्खा
प्लास्टिक - कि के हो? के अपरेसन plasticity भनिन्छ?
"Duspatalin": के मद्दत गर्छ, समीक्षा, analogs